कृष्ण के सी, अमेरिका, मार्च ७, २०१८
म आफू दुरुस्तै नेताजी जस्तै छु भन्ने देखाउन साद्गगीको भजन गाउँदै आदरणिय शुशिलदाको जस्तो कुच्चिएको सट लगाउनै पर्छ भन्ने कुनै शास्त्र र विधानले उल्लेख गरेको कुरा होइनहोला। तर सिदा शुशिलदालाई जसोतसो ब्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने पनि सहि होइन। उसो त चिट्टिकको दौरा सुरुवाल लगाउने गिरिजा कोइराला जस्तो ग्रेट पर्सनालिटीको व्यक्ति पनि त हुन सकिन्छ।
शुशिलादा आफैंमा विचार र ब्यबहारले आदर्श मान्छे हुनुहुन्थ्यो कपडा र साद्गगीले होइन। फेरि गिरिजाबाबु दौरा सुरुवालले मात्र महान भएको पनि होइन। त्यो त एउटा फर्स्ट साइटमा पर्ने प्रभाव हो। नेता बन्ने होडमा उहाँहरुको नक्कल गर्दैमा उहाँहरु जस्तो म पनि हुन्छु भन्ने विश्वास मलाइ लाग्दैन।
राजनीतिकै कुरागर्दा प्रचण्डले जस्तो राष्ट्रिय पोशाक मात्र होइन पुरानो भएकोले जनता, राष्ट्र, राष्ट्रिय झण्डा र अन्तमा आफ्नो राजनैतिक पार्टी नै फाल्नुपर्छ भन्ने पनि कुनै बिधिमा नहुनुपर्ने हो। खड्ग प्रसाद ओलीका के कुरा गर्नु, जमीन माथि नै पानीजाहाज चलाउने कुरा पनि नजिर हुँदैन होला। राजनीतिमा इतिहासले जे दियो त्यो हुनु जरुरी छैन, जे छ यो फाल्नु पनि जरुरि छैन तर वर्तमानमा देशको लागि के ठीक र उन्नत छ त्यो गर्नु जरुरी छ भन्ने मेरो मान्नुछ।
म पटक्कै राजनीति नबुझ्ने मान्छे। समाजशाश्त्र पढ्ने रुचि भएकोले होला राजनीति मेरो खुशीको बिषय कहिल्यै थिएन र होइन पनि। उसो त समाजशास्त्र र राजनीतिशास्त्र दुइ विपरित रुपले अध्ययन गर्ने बिषय रहेछन। विल्कुल अचम्म लाग्ने। समाजशास्त्रले टुक्रिएको समाजलाई जोडेर अध्ययन गर्छ अनि राजनीतिशास्त्रले सिंगो समाजलाई खण्डिकरण गरेर टुक्र्याएर अध्ययन गर्छ।
जहाँ एउटा राजनीतिज्ञको उदय हुन्छ त्यो समाज कम्तिमा पनि दुई खेमामा विभाजित हुन्छ। राजनैतिक प्रभावमा परेर एउटा टोल सुधार समिती बनाइयो भने त्यो समिति बन्दैमा पक्ष र विपक्ष गरि दुइ खेमामा सुरु हुन्छ। समाजशास्त्रीय हिसाबले बनाइयो भने त्यो एउटा मात्र समिति सुधार समिति हुन्छ। त्यसैले बिकासका गतिबिधि गर्दा राजनैतिक रुपले गर्नुहुँदैन भनिएको हो। बिकास गर्दा समाज जुटेर गर्नुपर्छ फुटेर होइन अनि राजनैतिक रुपमा गर्दा बायस र विभाजन हुन्छ।
अब एउटा छोटो उदाहरण दिने प्रयास गरौँ। डा शेखर कोइराला र डा शशांक कोइराला नेपाली काँग्रेसको गत महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा महामंत्रीका लागि आपसमा प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थो। त्यो बाजी डा शशांकले मार्नुभयो। डा शशांकले बाजीमार्दा एकापक्षले खुशी मनाए अनि डा शेखरप्रति अर्कापक्षले सदासयाता देखाए। राजनीतिले घर पनि फोरेर मज्जा लिन्छ। हेर्नेलाई अचम्म लागे पनि यो राजनीतिको आफ्नै स्वभाविक पक्ष हो।
पृथ्वी नारायण शाहले भनेको जस्तो नेपाल चार-जात छत्तिसवर्णको फुलवारी हो भन्नु चाहिँ समाजशास्त्रको अध्यन हो। शाहले टुक्रिएको दुइदर्जनका हाराहारीका राज्यहरु एक देशमा लैजानुभयो। भलै त्यसलाई कतिपयले आलोचना गर्ने गरेका छन्। तर अचम्मको कुरा के छ भने ऐलेको प्रजातान्त्रतिक राजनीतिले एउटा देश टुक्राएर ७ राज्य, अनेकौं जाति, देशी, मदेसी, परदेसी, प्रदेशी, पहाडे अनि मुस्लिम इत्यादी बनायो।
तात्विक फरक हेर्दा के पाइन्छ भने-पृथ्वी नारायण शाहले चार-जात छत्तिसवर्णलाई एउटा देश बनाउनुभयो अनि ऐले एउटा देशलाइ दर्जनौं जात र सयौं वर्णका ७ राज्यमा बिभाजन गरियो। यो बामपन्थीहरुको भाषामा अग्रगामी होला तर याथार्थमा चाहिं पश्चगामी खण्डिकरण हो।
राजनीतिमा यसलाई छलाङ्ग र फलांग मार्ने जे-जे भनिए पनि समाजशास्त्रमा भने यो सुत्रै-सूत्रको कात्रोले बेरिएको मुर्दा बनाउने जड्सुत्रको खण्डिकरण हो। आजकल हरेक कुरामा सुत्र छ। चुनाब, न्यायाधीको परिक्षा, शिक्षा, प्रशाशन, बाटो, कुलो, चुलो र चौतारो बनाउने कुरामा पनि भागबण्डा र खण्डिकरणको सुत्र छ। कुनै दिन बिहे गर्दा पनि जन्ती जाने सुत्र बन्ने छ। यो यो को भागमा यति संख्या जना पाउने भन्ने समावेसी काइते विचार आयो भने समावेसीको नाममा बिथोलिएको कुरुप कति सुन्दर देखिने हो थाहा छैन।
नेपाल जस्तो जनासंख्याको कम प्रतिशत मात्र शिक्षित भएको देशमा सांसदकै मत इन्भ्यालिड होला भनेर डराउनु पर्ने ठाउँमा छ। अझै पनि संसारकै अति कठिन सुत्रबद्ध मतपत्र स्थानिय चुनावमा प्रयोग गरिएको देखिएको छ। उता नागरिकको सामाजिक र आर्थिक बिकासमा भने कुनै सुत्र बनेकै छैन। त्यसमा पनि सुत्र बनाउनु पर्ने हो नि। दलितको शिक्षा र आर्थिक यति प्रतिशतले उकास्ने, महिलाको यति, अल्प संख्याकको यति कुनी कसको कति कति, खै त सुत्र बनेको बिकासको ?
आम नागरिक र देशको आर्थिक बिकासको सुत्र खै ? राजनीतक पार्टी र नेत्रित्वमा रहने नेताहरुलाई आवश्यक सबै कुराको सुत्र बन्यो तर देश बनाउने कुराको सुत्र अझै पनि बनेन। कुनै पनि राजनीतक पार्टीको बिधानमा नेपाल कसरी बिकास गर्न सकिन्छ भनेर नीति लेखिएको पाइंदैन। उनीहरुको महाधिवेशनमा पनि नेपाल बिकासको बिषयले छलफल पाएको छैन। अनि उनीहरुले नै देशको नेतृत्व लिने भएपछि कसरी हुन्छ त नेपालको उन्नति? हरेक चोकमा हेर्नु राजनीति बाहेक अरु नजान्ने ज्वारीकोटेहरुको चिया पचाउने गफ कम्ता हुँदैन।
समाजशास्त्रले दुश्मनहरु पनि मिलाएर लिएर जान्छ। तर पनि देशको तन्त्र भने राजनीतिबाट चल्नुपर्छ। समाज चाहिँ समाजशास्त्रको सिद्धान्त र देशको अर्थतन्त्र अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुरुप आथिक बिकासतर्फ चल्नुपर्छ।राजनीतिमा एका परिवारका दुइ कोइराला भिड्छ्न अनि समाजशास्त्रमा काँग्रेसी बन्धु र नेकपा बन्धु मिलेर माओवादीले ध्वस्त पारेको एउटा बिद्यालय भवन बनाउँछन्। समाजमा राजनीति र समाजशास्त्रको अध्ययन गर्ने बिधि यसरी धेरै तरिकाले फरक छन। तर पनि नेपालमा भने राजनैतिक रुपबाट मात्र हरेक विकासका कुराहरु हेरिन्छ र प्राक्टिस गरिन्छ।
त्यसैले समाजशास्त्रका व्यक्तिले राजनीति सजिलै चलाउन सक्छन तर राजनीति मात्र जानेकाले समाज चलाउन सक्दैनन्। नेपालका नेताहरु पनि राजनीति मात्र जानेका हुनाले समाज बुझ्दैन र देश पनि बुझेनन र अनि चलाउन पनि सकेनन। तर पनि चुनाव भने सजिलै जित्छन। अजिवको कुरा त राजनीति बाहेक अरु केही नजान्ने अनि आफ्नो कमजोरी छोप्न साद्गगी र ज्वारीकोटको नाटक गर्छन।
कान पाक्ने गरी बिपी र मदन भण्डारीको बिचारको कुरा गर्छन। तर पनि उनीहरुको बिषयलाई ब्याख्या गर्न धेरै कमले जान्दछन। मदन भण्डारीको एउटा भाषणमा मैले सुनेको थिएँ। यदि देशको उन्नति हुन्छ भने राजा रहनु र नरहनुले कुनै फरक पार्दैन। यसको अर्थ तन्त्र र नेतृत्व जसको भए पनि देश उन्नतितिर जान्छ भने केहि फरक पर्दैन भनेको थियो। तर केपी ओली भन्नुहुन्छ नेकपा त्यसमा पनि खड्ग ओली बाहेकले देश चल्दैन।
बिपीको अर्थशासत्रले भने जस्तो नेपाली काँग्रेसका कुन चाहिं अर्थमन्त्रीले छाप्रेहरुलाइ हेरेर बजेट बनाएको छ ? बिपीको अर्थशासत्रको मतलब के थियो त ? तल्लो दर्जाका आर्थिक भएका परिवारको आर्थिक स्थिति उकास्ने काम गर भनेको थियो। २०४६ देखि हाल सम्म कति पटक नेपाली काँग्रेस सत्तामा पुग्यो अनि कति पटक कम्युनिष्टले सत्तामा बसेर अर्थमन्त्रालय चलाए र छाप्रेहरुको आर्थिक अवस्था उकासे त ?
समाज र देशको सबैजसो परिवर्तन राजनैतिक नारा दिंदै राजनैतिक सिद्धान्तका आधारमा हुन्छ। जब परिवर्तन हुन्छ तब देश या समाज समाजशास्त्र र अर्थशास्त्रका सिद्धान्त अनुसरण गर्दै बिकासमा जान्छ। नेपालको हालको बिकास राजनैतिक नारा र सिद्धान्तका आधारमा प्रयास गरिएको छ। तसर्थ प्रचण्डको बिकास १०००% ले हुँदा पनि नागरिकको बिकास भने १००% ले तल झरेको आङ्कडाले देखाएको छ।
एउटा क्षेत्रको चुनाब कसरी जित्ने भन्ने आधारमा होइन हरेक नेपालीको कम्तिमा पनि हालको भन्दा थप ५/१० हजार मासिक आम्दानी कसरी बढाउने भनेर योजना गर्ने हो। अनि मात्र नागरिकको जीवनको परिवर्तन छिट्टै आउंछ। बिपीको अर्थाशाश्त्रले पनि तेसै भनेको छ। नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोग त छ तर योजना भने सरकारको पार्टीले चुनाव कसरी जित्छ भनेर बनाइन्छ। परिवर्तन अब आवश्यक छैन केवल नीति, योजना र कार्यन्वयन मात्र फरक हुनुपर्ने हो। सुत्रै सुत्रले जटिल बनाउने होइन समाजलाइ सजिलो र हरेक मान्छेले बुझ्ने स्वादिलो पाच्य हुने खालको बनाइदिनुहोस।
अन्तमा; संसारका सबै कुरा नेपालमा टेष्ट हुन थाले, भारत र चीन जस्ताको खेल सोझो रुपमा हुन थाले। अतिदुर्गमको बिकास कसरी गर्ने अर्को देशलाई सोद्धने र आफूले केहि नसिक्ने, आसेपासे र ज्वारिकोट भिरेर नेताको घर धाएका भरमा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने मौका पाउने, पार्टीका संरचना र स्थानीय कुराले ध्यान नपाउने, नागरिकको सामाजिक र आर्थिक स्तर उन्नतिमा केहि पनि नगर्ने भएकाले यो एउटा अर्को देशको सुत्रले मात्र काम गरेको छ। योजना आयोगका दिग्गजको दिमागले काम गर्न पाएको छैन। सत्ता गुम्ने दरमा संसदको नै हत्या गर्ने र त्यसका लाइ आन्दोन गर्ने तर नागरिकको लागि केहि नगर्ने देखियो। यो परिपाटी रहेसम्म अर्को उन्नति हुने देखिएन।